सोमपालको टिम हक्सले ग्लोबल टि-२० को उपाधी जित्यो
दोश्रो संस्करणको उपाधी जितेको विन्नीपेगमा नेपाली खेलाडी सोमपाल कामी आबद्ध छन्
फोटो: ग्लोबल टि-२०
एजेन्सी। क्यानाडामा जारी ग्लोबल टि-२० को उपाधी विन्नीपेग हक्सले भानकुभर नाइट्सलाई सुपर ओभरमा पराजित गर्दै कब्जा गरेको छ।
दोश्रो संस्करणको उपाधी जितेको विन्नीपेगमा नेपाली खेलाडी सोमपाल कामी आबद्ध छन् तर उनले फाइनल खेलमा भने अन्तिम-११ भित्र परेका थिएनन्।
खेलमा टस हारेर ब्याटिंग गरेको विन्नीपेगले दिएको १ सय ९२ रनकोबनाएको थियो। दोस्रो इनिङ्गमा भानकुभर नाइट्सले पनि २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १ सय ९२ रन नै बनाएपछि खेल बराबर भएको थियो। त्यसपछि खेल सुपर ओभरमा पुग्यो। सुपर ओभरमा पहिले ब्याटिंग गरेको भानकुभरले दिएको १० रन भेट्याउन्दै विन्नीपेगले यो सस्करणको उपाधि पहिलो पटक हात पार्यो।
AND @WinnipegGT20 ARE #GT2019 CHAMPIONS!
MAKE SOME NOISE FOR THE WINNERS OF SEASON 2.#VKvsWH pic.twitter.com/7PMD2VnOJY
दोस्रो इनिङ्गमा १ सय ९३ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा निकै कमजोर सुरुवात गरेको भानकुभरले आठौँ ओभरमा ५३ रन बनाएर ४ विकेट गुमाईसकेको थियो। तर कप्तान शोयब मलिक र साद बिन जाफरले पाँचौ विकेटको लागि ८६ रनको राम्रो साझेदारी गरे। मलिक १७ औं ओभरमा रन आउट भए जस अघि ३६ बलमा ६ चौका र ३ छक्का मदतले ६४ को पारी खेले।
खेलको अन्तिम ३ ओभरमा जित्न ५३ रन आवस्यक हुँदा ब्याटिंगमा आएका आन्द्रे रसेलले १८ औं ओभरमा २ छक्का तथा १९ औं ओभरमा २ चौका र २ छक्का प्रहार गर्दै जितको बाटोमा लगेका थिए । अन्तिम ओभरमा जितको लागि १७ रन आवस्यक हुँदा कलिम सानाले गरेको ओभरको दोश्रो र तेश्रो बलमा छक्का प्रहार गर्दै रसेलले जितको समीकरण २ बलमा ३ रन बनाए। तर त्यसपछि पाँचौ बलमा रसेलले रन बनाउन सकेनन्अ र अन्तिम बलमा रसेलले रन मात्रै बनाउन सके र खेल बराबरी हुन पुग्यो।
पहिले इनिङ्गमा ब्याटिंग गर्ने क्रममा विन्नीपेग ओपनर शैमन अनवरले सर्वाधिक ९०, क्रिस लिनले ३७ तथा जेपी डुमिनिले ३३ रन बनाएका थिए। उत्कृस्ट फर्ममा रहेका युएई ब्याट्सम्यान अनवरले ४५ बलमा ८ चौका र ७ छक्का प्रहार गरे। पहिलो विकेटको लागि उनले लिनसंग ६ ओभरमा ७३ रनको तथा तेश्रो विकेटको लागि डुमिनिसंग ८१ रनको साझेदारी गरे।
Who is going to win this classic?
RT for @VKnights_
Like for @WinnipegGT20 #GT2019#VKvsWH pic.twitter.com/Gw8X638dd5
बलिङ्ग तर्फ भानकुभर नाइट्स बलर आन्द्रे रसेलले सर्वाधिक ४ विकेट लिए। ४ ओभरमा उनले मात्र २९ रन खर्चिए। अलि खान र रायड पठानले २/२ विकेट लिए।